အဖွူရောငျ အိမျလေးတလုံး: 2010
တခါတလေ မှာ ထပ်တူကျတက်ပေမယ့် တခါတလေမှာတော့ တက်တက်စင်အောင် လွဲတက်ပါတယ် ၊၊ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ရောက်တဲ့ နေရာမှာ ကျ၇ာ ဇာတ်ရုပ်မှာ ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်တက်ရင်တော့ ထူးထူးချွန်ချွန် အကယ်ဒမီ မရရင်တောင်မှ ပရိတ်သတ် ရဲ့ အသိအမှတ် ပြုမှုကို တော့ ရတက်ပါတယ် .....
ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီး ၀ါဝါ၀င်းရွှေက ငွေအတွက် ရုပ်ရှင်ရိုက်ခဲ့တာပေမယ့် လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်ခဲ့သလို .... စိုးမြတ်သူဇာ ဆိုတဲ့ မင်းသမိးလည်း ထို့အတူပါပဲ ......
ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာက ဆရာဝန်ပေမယ့် .... အဆင်မသင့်သူတွေက စီးပွားရေး လုပ်ရင်း ကိုယ့်ရဲ့ အောင် မြင်မှုကို ရယူသွားတက်ကြပါတယ်
ဒါကိုတော့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးလို့ပဲ ဆို၇ပါမယ် ......
၁၀ တန်းတုန်းက ဆရာတစ်ယောက်က ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်ခဲ့ပေမယ့် ..... အဆင်မပြေတော့ ကျူရှင်ဆရာ ဘ၀နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဒေသမှာတော့ အတော်ကို အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ် ....
လူတော်တွေက ဘယ်နေရာရောက်ရောက် အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားကြတယ်လို့ပဲ မှတ်ယူမိပါတယ် ....
တကယ်လို့ သူတို့ လုပ်ချင်တာ ၊ ၀ါသနာပါတာကိုသာ လုပ်ခွင့်ရရင် ပိုအောင်မြင်ပေမပေါ့ .......
ဒါပေမ့ယ် ဖြစ်ချင်တာ မဖြစ်လို့ ဆိုပြီး လောက ကို အရွဲ့တိုက် လမ်းလွဲလိုက်နေမယ့် အစား ကိုယ် ကျလာတဲ့ ဇာတ်ရုပ်မှာ ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင် အောင်မြင်နေသူတွေကို အထူးကို လေးစားမိတာပါပဲ ....
လူတိုင်းကိုလည်း အဲဒီလိုပဲ ကြိုးစားကျစေချင်ပါတယ်
မြတ်နိုးမေ နှင့် အချစ်ဆိုင်
၀န်ခံချက် ၊၊ ၊၊ ကဗျာ အဟောင်းလေးပါ ၊၊ ဘာလို့ပြန်တင်ဖြစ်လဲဆိုတော့ ဟိုတစ်နေ့က အင်တာဗျူးလေး တစ်ခုမှာ အိမ်ထောင်ဆက်တွေ မများချင်ပဲ များခဲ့ရပါတယ် ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို တွေ့မိလို့ပါ ၊၊ ဟုတ်ပါတယ် ၊၊ တခါတလေမှာ မဖြစ်ချင်ပေမယ့် ငြင်းဆန်ရှောင်ဖယ်လို့ မရတဲ့ အကြောင်းတရားတွေကြောင့် ဖြစ်သလို ဆက် သွားနေရတဲ့ ဘ၀တွေ အများကြီးပါဆိုတာ လေးကို သိစေချင်ပါတယ် ၊၊ မကောင်းဘူးဆိုတာ သိပေမယ့် မလုပ် ချင်ပေမယ့် လောက ဇာတ်ဆရာ အလိုကျ သင့်တော်ရာ ဇာတ်ရုပ်မှာ ပီပြင်အောင် လုပ်နေရသူတွေ အများကြီး ပါ .....
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ မအေးသာ တစ်ယောက်လှခဲ့တာပေါ့လေ …… အခုများတော့လည်း ပါးရေနားရေ တွေ အတွန့်တွန့်နဲ့ အသက် ၈၀ ကျော် အဖွားကြီး ဖြစ်နေပါ့ပေါလား …………………
ရွယ်တူတွေလည်း တစ်ချို့တော့ သွားနှင့်ကြပြီ ၊၊ ကိုယ်မှာသာ အသက်ရှည်လို့ ကိုယ်မချမ်းသာပဲ ဒီအတိုင်း အသက်ရှင်နေရတာ ၊၊ ဘုရားတရားရယ်လို့လည်း ၀ါတွင်းကာလလေးတောင်မှ …. ဘုန်းကြီးကျောင်းဆိုတာ ပုံမှန် မရောက်ဖြစ်ခဲ့ ၊၊ ကိုယ့်ဝမ်းစာ ကိုယ်ရှာစားရတဲ့ဘ၀ … ဘယ်မှာများအေးချမ်းပါ့မလဲလေ ၊၊ ဒီနေ့လည်း နေ့မမြင့်ခင် အစောထလို့ နောက်နေ့စာလေးရအောင် သွားအုံးမှ ၊၊ လူတွေက တောတွေ ရှင်းတော့ အရင်လို အင်ဖက်ကလည်း တောစပ်တင် ခပ်လွယ်လွယ်မရတော့ ၊၊ တော်တော်လေး တောဝင်နိုင်ပါမှ တစ်နေ့စာ လေး အဆင် ပြေတာ ၊၊
သားလုပ်တဲ့သူကလည်း သူကိုယ်တိုင်တောင် မှ မွေးထားတဲ့ တစ်ကျိပ်ကိုးယောက် အပေါက်လောက် အောင် မဖို့နိုင်ရှာတော့ ကိုယ်လည်း ဘာမှ မမျှော်ကိုးပါဘူးလေ ၊၊ သမီးကလည်း လင်သည် ယောင်္ကျား အရက်သမား ကစော်ဖိုးတောင် မလောက်တော့ ခက်သားလား ၊၊
မှတ်မှတ်ယယ သူတို့အဖေ ကိုလူလှနဲ့ မရခင် အပျိုဘ၀ကတည်းက ဖက်ခူးရောင်းလာတာ အခုအသက် ၈၀ ကျော်တော့လည်း ဒီဖက်တွေ နဲ့ ကျင်လည်နေရတုန်း ၊၊ ကိုယ်ခူးခဲ့တဲ့အင်ဖက်ပင်သာ ကြီးလို့ ထင်းဖြစ်သွား တယ် ကိုယ့်မှာတော့ ဒီတောထဲမှာပဲ ဖက်ခူးလိုက် မှိုနှုတ်လိုက် အင်အုလေး ယက်လိုက်နဲ့ ရာသီစက်ဝန်းလို လည်ပတ်လို့ပါလား ……………..အင်း ငါဘာတွေ တွေးနေမိပါလို့ လုပ်စရာ ရှိတာလေး မြန်မြန်လုပ်မှ … မနက်ဖန်စာ မရှိရင် အခက်လား ……………..
ဒီနေ့မေးလေးတစ်ခုကနေ နိုင်ငံခြားမှာ အသက်ကြီးတဲ့ သူတွေ ဘ၀မလှ ကြပါကြောင်း စာလေးတွေ့လို့ပါ ၊၊ အမှန်တော့ ရေးချင်တာ ကြာခဲ့ပါပြီ ၊၊ ဒါတကယ့် အဖြစ်ပါ ၊၊ ဒေါ်အေးသာဆိုတဲ့ဖက်ရွက်ရောင်းရတဲ့ အဖွား ကြီး အကြောင်းပါ ၊၊ ရွာက အဖွားကြီး တစ်ယောက် အကြောင်းပါ ၊၊ တကယ့်အဖြစ်ပါ ၊၊ ဘာလို့ ရေးဖြစ်သွား လည်းဆိုတော့ အင်း …. သူဌေးသင်္ဘောမှောက်တာကို ငိုနေတဲ့ သူတွေ ကို သနားလို့ပါ ၊၊ သူတောင်းစား ခွက် ပျောက် တာ ပိုအရေးကြီးတယ်ထင်ပါတယ် ……. ကန့်လန့်ကျွန်တော် ကျွန်တော် ကန့်လန့် ပါ ဗျာ …
ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ အမြဲတမ်း ပတ်သွားမယ်လို့ ယူဆခဲ့ဖူးတဲ့ နာရီလေးတစ်လုံး ရှိခဲ့ဖူးပါတယ် ၊၊ နာရီလေးဟာ ကျွန်တော့်ကို ချစ်တယ် လို့ ထင်မှတ်ခဲ့ဖူးတယ် ၊၊ ကျွန်တော် မပတ်ချင်ခဲ့ရင်တောင် ကျွန်တော့်အပါးမှာ ရှိနေမှာပဲလို့ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဖူးပါတယ် ၊၊ ဒါပေမယ့် အခုတော့ အဲဒီ နာရီလေး ပျောက်သွား ခဲ့တာ နှစ်ပေါက်ခဲ့ပြီပေါ့ ၊၊ တခါတလေ ဖန်စီလေးတွေ ၀တ်ချင်တဲ့အခါ အဲဒီနာရီလေးကို တိတ်တိတ်လေး ခဏချွတ်ချင် ချွတ်တက်ခဲ့ပေမယ့် တစ်ဘ၀လုံး ပတ်သွားမယ့် နာရီလေးမို့ အမြတ်တနိုး တန်ဖိုးထားခဲ့တာ တော့ ကိုယ်တိုင်နဲ့ နာရီလေးသာ အသိဆုံးဖြစ်မှာပါ ၊၊
အဲဒီနာရီလေးကို တမ်းတမိနေဆဲ ……. တခါတခါ ယောင်ယောင် ပြီး ကြည့်မိနေဆဲ …………. ဒါပေမယ့် နာရီလေးကတော့ ကျွန်တော့်အပါးမှာ မရှိခဲ့တာ ကြာခဲ့ပြီ ……………..
နာရီမရှိတာ ကျွန်တော့်အတွက် အသားကျနေပေမယ့် အဖေတို့ အမေတို့အတွက်တော့ စိတ်စနောင့်စနင်း ဖြစ်စေနေခဲ့တယ်လေ ….. နာရီလေးတွေ တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး ပြရင်း အလုပ်ရှုပ်နေရှာတဲ့ မိဘတွေကို သနား မိသား ….
ကိုယ်တိုင် စိတ်ထဲမှာ နှစ်နှစ်ကာကာ လိုချင်တပ်မက် မရှိတော့ရင် ဘယ်တော့ မှ နာရီ မပတ်တော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့တာ ……..
အခုတော့ နာရီလေးတစ်လုံး ……………
အဲဒါ ကိုယ့်နာရီလေးများလား ရယ်လို့…………………….
ခါတလေ ( ထိပ်ဆုံးသို့)
တစ်လုံးကျန်ပြန်ပေသမို့ ဖန်ဖန်လေ အားအင်နှိုးလို့ရယ်
စခဲ့မိဟာပေါ့ တစ်နေ့မှာ ဆုံးရာရောက်ပါလိမ့်
မှတ်စုလေးထဲမှာ အမြဲရှိနေတဲ့ ကဗျာလေးပါ ၊၊ စာအုပ်တစ်ခုခုထဲက ကူးထားခဲ့ဖူးတာ ၊၊ ကျောင်းပြီးကာစ ကတည်းက အလုပ် အကိုင် အဆင်မပြေလေတိုင်း နောက် ခုချိန်ထိ စ်ိတ်ညစ်စိတ်ပျက်နဲ့ အားလုံးကို ထားပြီး ထွက်ပြေးချင်စိတ်ပေါက်မိတိုင်း ပြန်ရွတ်မိတယ် ၊၊ နောက် တစ်ပုဒ်ကတော့ ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ဗေဒါလမ်း ကဗျာလေး ပါ ပဲ ၊၊ ကဗျာလေးကိုထက် သီချင်းလေးကို စိတ်ညစ်မိတိုင်း ရွတ်မိတယ် ၊၊ ညိုပြာပြာ ..... လတာပြင် ခြေရင်း လှိုင်းတက်ရာ ဗေဒါတက် လှိုင်းသက်ရာဆင်း ................ ဆို အစချီတဲ့ ဒီသီချင်းလေးက အင်မတန်မှ အသက်ပါလှပါတယ် .............
တခါတခါ ထွက်ပြေးချင်းစိတ်တွေ ပေါက်မိပေမယ့် ကိုယ် ရွေးခဲ့တဲ့ လမ်းပေမို့ ဆုံးအောင်တော့ ဆက်လျှောက်ရ ပေအုံးမပေါ့လေ ............
“ ဗေဒါလမ်း ”
ဗေဒါမ အထွေး။အုန်းလက်ကြွေ သူ့နံဘေး၊
ဆရာဇော်ဂျီ (၁၉၀၇ – ၁၉၉၀)
" မဟုတ်သေးဘူး လေးကြည်ဖြူ ........... နင်ထွက်သွားမယ်. လမ်းမှာ ငါဟာ ဆူးညှောင့်  ခလုတ် တစ်ခု မဖြစ်စေ ရပါဘူး ......... နင်သွားချင်ရာသွားဖို. ခင်းပေးထားမယ်. ခြေနင်းပျဉ် ပါးပါးလေးရယ် ပါ ........... "
ကြည်ဖြူရေ ....... နင်ဘယ်ဆီမှာများ ရောက်နေမလဲနော် ၊ နင်ရှိနေမယ်. အရပ်ကို မသိခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်း ကောင်းသားလား ခုများတော. နင်န.ဲငါန.ဲ ဘ၀ က နီးလျက်နဲ.ဝေး ၊ ကျွမ်းလျက်နဲ.ဆွေးနေရပါလားနော် ..... ငါလေ ဒီနေရာကို ပြန်ရောက်တိုင်း ၊ ရင်ထဲမှာ မချိအောင်ခံစားရတာ ကိုယ်တိုင်သာ သိပါတယ် ၊၊ မလာပဲလည်း မနေနိုင် တာလည်း တာဆီးလို.မရတဲ့ နင့်ကို ချစ်နေဆဲ ငါ့ရဲ အလွမ်းတွေ ကြောင်.ပေါ့ ၊၊ နင်ရဲ. သတင်းကောင်း တွေကြားရတိုင်း ၀မ်းသာဂုဏ်ယူမိပေမယ့် ၊ လွမ်းတဲ.စိတ်နဲ. မချိအောင်နာ တဲ့ ရင် နှစ်ခြမ်းက အလွမ်းတွေက ဗြမ်းဗြမ်းကွဲရော.ပေါ့ ၊၊ နင်က ငါ.ကိုမှာသတဲ့လေ " ပြုစု ပျိုးထောင်ခဲတဲ့ နင်.ရဲ.ကျေးဇူးတွေနဲ. ရရှိလာခဲ့တဲ့ အသိးအပွင်.တွေကို အခြား နင်မဟုတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ကို ပေးဆပ်နေရတာ ငါ ရင်အနာဆုံးပါတဲ့ " သြော် ခုချိန်ထိ ငါရင် နာ အောင် စကားတွေတက်နေဆဲပါလား မရွှေစာ ၊၊
နင်ရယ် ငါရယ် အတူရှိနေတဲ့ အချိန်လေးမှာ နင်စိတ် ချမ်းသာ တာကို မြင်ရရင် ကျေနပ်နေတဲ့ ငါက နင်လိုတာကို လုပ်ပေးဖို. ဆန္ဒ ဆိုတာက လွဲရင် ငါ.ရင်ထဲမှာ ဗလာပါ လေးကြည်ြ့ဖူ ရယ် ၊၊ " ငါရှိရာကို မလာနိုင်တဲ့ သူဟာ ငါ.ကို စော်ကားတာ မဟုတ်ဘူးလား တိုးမောင် " လို.နင်က တိုးမောင်ကို မေးတယ်လို . ငါ.ကို ပြန်ပြောပြတယ် ၊၊ သြော်မာနတွေ တံခွန်ထူလို. ၊ အောင်လံတွေ တလူလူ လွင်.နေဆဲ ပါလားရယ်လို. တွေးမိသေးတယ် မလေးရယ် ၊၊ ငါလေ နင်.ကို အသည်းနင်.အောင် ချစ်တယ် ၊၊ ဒါပေမယ်. နင်.ကို ရင်နာအောင်လည်း မုန်းတယ်သိလား .......... နင်ရဲ့ အဆင်ခြင်တရားကင်းတဲံ့ စကားလုံးတွေ အောက်မှာ ငါရဲ့. သိက္ခာတရားတွေ ဘာမှကုန်းကောက် စရာမ ရှိတော.ဘူး ၊၊ ဒါပေမယ်. ချစ်နေဆဲပါ မလေးရယ် ၊၊
နင့်ကို ချစ်တဲ့ အချစ်တွေက ဘာနဲတူလဲဆိုတော. ကန်တက် ကျောက်တက်တဲ့ ကလေးလေးကို ချစ်ရသလို ၊၊ ဆဲတက်ကာစ ကလေးသေးသေးလေးကို ချစ်ရသလို ၊၊ ဘာတွေဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း ငါနင့်အပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာတွေ မပြောင်းလဲသေးတာ ငါ့ ဘာသာ အသိဆုံး ပါလေ၊၊ ဒီနေ.လေ ဘာကြောင့် မှန်းမသိဘူး နင်နဲ.ငါ အတူ အမြဲရှိနေခဲ့တဲ့ ပိတောက်ပင်ကြီး နားမှာ လာထိုင်နေမိတယ် ၊၊ အမေကတော. ငိုတယ်ကြည်ဖြူရယ် ၊၊ ထုံးစံအတိုင်း သူက ငါ နင်.ကို သတိယနေတယ် ထင်တိုင်းပေါ. ၊၊ ငါပြောပါတယ် ဟာ အားလုံး ဟာကံတရားပါလို. ၊၊ အမေ့ သား သူ.ကို သတိယနေတာမဟုတ်ဘူး ၊ သားရဲ့ဘ၀ ကို သားလွမ်း နေတာ ပါလို. ၊၊ သူသာ တကယ် ချစ်ရင် သားရဲ့ အပြစ် တွေက သူ.ရဲ့ ချစ်ခြင်းတွေ အောက်မှာ အပြစ်ကင်း ပျောက်သွား မှာပေါ. လို. ၊၊ ငါ့အမေက ရိုးသားပြီး ချစ်စရာကောင်းပါ တယ် ကြည်ဖြူရယ် ၊၊ ဒါပေမယ်. နင် လိုချင်တဲ့ ဂုဏ် သရေ ရှိတဲ့ ပညာတက် မိန်းမကြီးတော. မဟုတ်ဘူးနော် ၊၊
အဲဒီနှစ်က ငါ အတွက်ကံကြမ္မာဆိုး ၀င်တဲ့နှစ်ပဲ ၊၊ ငါတို.မိသားစု မှာ ငါဟာ သားကြီးတစ်ယောက် ၊၊ အငယ်တွေ ရှေ.ရေးကို အမေအိုကြီး တစ်ယောက်တည်း နဲ့. ငါ ဘယ်လိုထားခဲ့ရက်ပါ.မလဲ ၊၊ နင်ပြန်လာပြီး ငါ.ကိုခေါ်တော. အမေက ဘာမှမပြောဘူး ၊၊ သားသဘောပါတဲ့ ၊၊ ဒါပေမယ်.လေ အမေ ရယ် အဲဒီညက ငိုလိုက်တာ ဟယ် တည လုံး ပဲ ၊၊ငါပြန်မလာဘူး ထင်လို. ၊၊ ငါရှိနေတာကို အမေမသိဘူး ၊၊နောက် အငယ်တွေကို ပြောနေတာ ကြားတော့ ငါ.ရင်ထဲမှာ နင်.သွားတာပဲ ၊၊ " မင်းတို. အကိုကြီးက အမေတို.နဲ့ ဝေး ရာ ဟိုးအဝေးကြီးကို ထွက်သွားတော.မှာ ၊ ဒီရက်ပိုင်းမှာ ဘာမှ စိတ်ဆင်း ရဲစရာတွေ မပြောနဲ့နော် ၊ အမေ.သား စိတ်မဖြောင်.မှာ စိုးလို.တဲ့လေ " ငါလေ မုန်းလိုက်တာ ၊ ငါကိုယ်.ငါပေါ .၊၊ နင်ကိုတော. အပြစ်မမြင်ရက်ပါဘူး မလေးရယ် ၊၊ နင်က ငါတို. ဘ၀တွေကိုမှ မသိဘဲကိုး ၊၊ နင်ဖြတ်သန်းခဲ့ ရတဲ့နင့်ဘ၀က အဆင်ပြေတဲ့ အခြေတင့်တဲ့ ဘ၀ကိုး၊၊ ငါ.အမေ သနားစရာပါ မလေးရယ် ၊၊
နင်.ကို ငါဘယ်တုန်းကမှ မပြော ဘူးတဲ့ အကြောင်းလေးပေါ .၊၊ နင်မှတ်မိမလား ၊၊ ငါကို.ကားမောင်းတက်လားမေးတော. လေ၊၊ အမေ.ကို ပြန်ပြောပြတော . အမေက သားရယ် ဟုတ်သား ပဲ ငါ.သားက ကားမောင်းတက်ရမှာပေါ့ ၊ သွားပြီးသင်တန်းတက်နော် ဆိုပြီး သူရဲ့ နားကပ်လေးကို ငါမသိအောင် ပေါင် ပြီးပေးရှာတယ်လေ ၊၊ သူသိပ်မြတ်နိုးရှာတဲ့ တစ်ရံတည်းသော မြနားကပ်လေး ၊၊ ငါ.အမေဟာ နင်ကို သိပ် ချစ်သလို လေးစားနေဆဲပါ မလေးရယ် ၊၊ ဟိုတစ်နေ.က နင်တို.အိမ်က နင်တို.ရဲ မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာ လေး လာ ပို.သွား တယ်လေ၊၊ နင်.အမေ ကိုယ်တိုင် လေးလေး စားစား လာ ဖိတ်သွား တာ ပါ ၊၊ ပြောသွားပါ သေးတယ် ၊ မောင် မိုးရော ဘယ်တော. ယူမလဲ တဲ့ ၊၊ အခု လေးကြည်ဖြူ ကောင်လေး က လေးကြည်ဖြူကို အရမ်းချစ်သလို ၊ ပညာတက် ၊ ငွေရှာလည်းကောင်း ပါသတဲ့လေ၊၊ အမေက ၀မ်းသာ လို. နင်အတွက်လေ၊၊ နောက်ငါ.ကို ပြောသေးတယ် ၊၊ အလေး အတွက် ဂုဏ် ယူလိုက်ပါ သားရယ်တဲ့လေ၊၊ အမေတို.နဲ့သာ ရရင် ၊ ငါ.သားနဲ့သာဆို ဒီလောက် အဆင်ပြေမှာမဟုတ် ဘူးတဲ့လေ၊၊ မျက် ရည် စတွေ ဝေလို.ပေါ. ၊၊
အခုတော. နင်လည်း နင်.ဘ၀နဲ.နင် အခြေကျနေပြီ ဆိုတော. ၊၊ ငါဟိုတစ်နေ. က ကျောင်းကို ကြုံလို. ၀င် ခဲ့သေး တယ် ၊၊ နင်အရမ်းသဘောကျ တဲ. လက်ပံပင်ကြီးလည်း ဒီအတိုင်းပေါ. ၊၊ လက်ပံပွင်.တွေ လည်း ဝေ လို.ကွယ် ၊၊ ကျောင်းရှေ. က မလေးရှား ပိတောက်တွေ က ပွင့် နေလိုက်တာ မလေးရယ် ၊၊ ငါတို.နောက်ဆုံး ကျောင်းကြီး မှာ ဆုံဖြစ်တဲ့ နေ.က အတိုင်း ပဲ၊၊ နင်မင်္ဂလာဆောင် အတွက်များ ဂုဏ်ပြုကြလေ သလားလို. ၊၊ နင်ရယ် ငါရယ် အတူတူစိုက် ခဲ့ဘူးတဲ့ စွယ်တော် ပင်လေးက ထူးထူုး ခြား အပွင်လေးနှစ်ပွင်.တည်း ၊၊ တစ်ပွင်. က အဖြူ ၊ တစ်ပွင်.က ခရမ်းရောင်လေး ၊၊ အပင်လေးကို ခြံစည်းရိုးလေး ခတ်ပြီး စာလေးရေးထားတာက ဘယ်မဆုံပန်းတဲ့ ၊၊ ဘယ်သူကများ နာမည်ပေးထားပါလိမ်.နော် ၊၊ တို.များစိုက်ခဲ့ တယ်ဆိုတာာ သူတို.မှ မသိဘဲလေ ၊၊ နောက် ထူးထူး ခြားခြား အပင်တမျိုး တည်းက အရောင် နှစ်မျိုးနဲ့ ပန်းတွေပွင်.နေတာ ကိုး ၊၊ ဒီ ဘယ်မဆုံ ပန်းပင်လေးကို မောင်မိုး နဲ. လေးကြည်ဖြူ ဆိုတဲ့. ဘယ်တော.မှ မဆုံနိုင်တဲ့ ချစ်သူ နှစ်ဦး စိုက်ပျိုး ခဲ့ဘူးတယ် ဆိုတာတော. တိုများရဲ. ဘေးက လက်ခုပ်ပင်ကြီး လည်းသိမှာပဲ ၊၊ တို.များလျှောက်နေကြ ဘွဲနှင်းသ ဘင်လမ်းကြီး လည်းသိမှာပဲ ၊၊ နောက် စာသင်ဆောင်ဖြူဖြူ ကြီးတွေလည်း သိနေမှာပဲနော် ၊၊
နောက်တစ်ခေါက် ကျောင်းကြီးကို ပြန်လာဖြစ်ခဲ့ရင် ဘယ်မဆုံ ပန်းပင်လေးရယ် ၊ အဲဒီအပင်နား မှာနင်.ကို နေ.တိုင်းလွမ်းနေရှာတဲ့ မောင်မိုးဆိုတဲ့ ငါ.ဆီရယ်ကို တစ်ခေါက်လောက်ဖြစ်ဖြစ် လာကြည်.ခဲ့ပါလား လေးကြည်ဖြူ .. နင်.ကို အလွမ်းပြေ ကြည်.ရုံလေးသက်သက်ရယ် ပါ ......................... ပြီးတော. နင် မယုံတဲ့ ဘယ်မဆုံပန်းလေး လည်း ပြချင်ရုံပါ ..................
၀န်ခံချက် ဒီနေ့လေးကို အမှတ်တယအဖြစ် ပိုစ့်အဟောင်းလေးကို ပြန်တင်ပါသည် ၊၊ မအားလပ်ပေမယ့် လွမ်း လျက်ပါ မလေးကြည်ဖြူ ရယ် P:
Gong Xi Fa Chai !!!!
အင်း ဒီလိုနဲ့ ဒီလိုနဲ့ပေါ့လေ ……….
အခုတလော ခဏခဏ ၀င် ကြည့်ဖြစ်နေတာကတော့ Facebook ပါပဲ ၊၊ သူငယ်ချင်းတွေ ဘာတွေ လုပ်နေလဲ ဆိုတာ သိရတယ် ၊၊ နောက် ကိုယ်ဝင်ကြည့်တာလည်း သူလည်းမသိဘူးဆိုတော့ လွတ်လပ်တယ် ၊၊ ဒီ Facebook ဆိုတာကို လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကတည်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် သုံးနေလို့ သူက ညွန်းခဲ့ပေမယ့် မ၀င်ဖြစ်ခဲ့ဘူး ၊ နောက်တစ်ခုက ကိုယ့်အပေါင်းအသင်းတွေက Friendster ပဲ သုံးကြတာ ဆိုတော့ အဲဒီကိုပဲ ၀င်ဖြစ်တယ် ၊၊ ဒါပေမယ့် friendster မှာ ဆိုးတာတစ်ခုက ကိုယ်ဝင်ကြည့် ရင် အိမ်ရှင်က သိနေတာပဲ ၊၊ အခုလည်း တချို့ ဘလော့တွေဆို အဲဒီလို တင်ထားတော့ နည်းနည်းတော့ တခါတလေ ကသိကအောက်ဖြစ်ပါတယ် ၊၊ ကောင်းတဲ့ ဘက်က ဖြေတွေးလိုက်တော့လည်း အော် ငါလာတာ သူသိတာပေါ့လေ လို့ပဲ တွေးလိုက် ပါတယ် ၊၊
အဲဒီလို ၀င်ကြည့်ဖြစ်တဲ့အခါ ခုတလော အများဆုံးတွေ့ရတာကတော့ ကြင်စဦး ဇနီးမောင်နှံ တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ပုံတွေ မင်္ဂလာဆောင်ပုံလေးတွေ စသည်ဖြင့် စသည်ဖြင့်ပေါ့ ၊၊ အင်း ကောင်းတယ် ၊၊ ၀မ်းမြောက် မိတယ် ၊၊ ဂုဏ်ယူမိတယ် ၊၊ အင်း ဒါပေမယ့် အတိတ်က အရိပ်တွေကိုလည်း သတိရမိတယ် ၊၊ ……………. သူတို့ရွေးချယ်မှုဟာ မှန်ကန်ပါတယ် ၊၊ သင့်တော်ပါတယ် ၊၊ မွန်မြတ်ပါတယ် ၊၊ လေးစားလောက်ပါတယ် ၊၊ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်မျက်စိ ထဲမတော့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း မဖြစ်တဲ့အတွက် နည်းနည်း လေးမှ တော့ အဆင်မပြေတာ အမှန်ပါ ၊၊ ကိုယ့်သဘောကိုယ့်အမြင်ပါနော် ၊၊ သူတို့ အဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းမတွေ ရွေးချယ်ထားတဲ့ သူတွေက တကယ့်ကို ပြစ်မျိုးမှည့်မထင် ၊ တန်းဝင်ကျောက်ကောင်း ၊ အကျင့်စာရိတကောင်းသူတွေလည်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ၊၊ သို့သော် သို့သော် ……..
အစ်မတစ်ယောက်လို ခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်း အမရဲ့ ပုံတွေ တွေ့တဲ့အခါ သူ့ဘေးက ဂုဏ်သရေ ရှိလူကြီးမင်းထက် ကျောင်းတုန်းက စီနီယာ အစ်ကိုကြီးကို ပဲပြေးမြင်မိတယ် ၊၊ ကိုယ်တိုင်လည်း လေးစားခဲ့ရတဲ့ သူဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့ကိုပဲ ဖြစ်စေချင်တယ် ၊၊ နောက် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်လည်း ဒီလိုပါပဲ မျက်ပေါက်ကျဉ်းကျဉ်း မျက်နှာပြားပြား နဲ့ ၀၀ ကြီးကို တွေတော့ သူငယ်ချင်း ကို သတိရမိတယ် ၊၊ သူတို့တွေဟာ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေ လောက်တော့ ရိုးသားတဲ့ မျက်လုံး ၊ ကြင်နာတဲ့ အပြုံးတွေ မရှိတာ ဘာသာ ခံစားမိတာပါပဲ ၊၊ ဖိတ်ချင်းဖိတ် ကိုယ့်အိတ်ထဲသာ ဖိတ်စေချင်တယ် ၊၊
အင်း ကိုကို မောင်မောင် ဒါလင် မရှိရင် မဖြစ်ပါ ဘူးဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းမတွေ အခုအခါ ကိုကို မောင်မောင် ဒါလင် အသစ်တွေနဲ့ တူယှဉ်တွဲပြီး ဓါတ်ပုံတွေ တင်ထားတဲ့အခါ သူတို့ ပြောတဲ့ ကိုကို မောင် မောင် ဒါလင် မရှိရင် ဆိုတာကို ပိုပြီး နားလည် လာပါတယ် ၊၊ အော် ကိုကိုမောင်မောင် ဒါလင် ဆိုတာက နာမ်စား ၊ မည်သူမဆို ဖြစ်နိုင်တယ် ၊၊ အင်း ကိုယ့်သူငယ်ချင်း ရောင်းရင်းတွေကတော့ ငယ်လေး ဟန်နီ အသည်းလေး ကို ပဲ လွမ်းနေဆဲ လားတော့ မသိ ခုချိန်ထိတော့ တကိုယ်တော် ခရီးကို ရွှက်လွင့်နေကြဆဲ……….
သူငယ်ချင်းများအား လွမ်းဆွတ်ရေးဖွဲ့ပါသည် ၊၊